Home » Cayaaraha » Xildhibaan C/qani Jeenyo oo Horumarin Isboorti ka Bilaabay HirShabelle
JOWHAR: C/qani C/llaahi Hilowle (C/qani Jeenyo) oo ka tirsan Xildhibaanada dhawaan loo dhaariyay Maamul Goboleedka HirShabelle ayaa durba bilaabay dhiirigelinta da`yarta ku nool Gobolka Shabeelada dhexe gaar ahaan Degmada Jowhar isagoo ciyaartoy badan u furay Tababar lagu barayo Ciyaaraha Kubadda Cagta iyo Kan Koleyga.
Xildhibaan C/qani Jeenyo oo ku caan baxay dhiirigelinta horumarka Isboortiga dalka ayaa tibaaxay inuu si weyn uga qeybqaadan doono sidii loo horumarin lahaa Ciyaaraha dalka gaar ahaanna uu rajeynayo HirShabelle inuu ka hirgeliyo dayactirka garoomada Isboortiga isagoo kaashanaya Jaaliyadaha ka soo jeeda maamulkan iyo bahda jecel horumarka isboortiga dalka.
“Waxaan bilownay dhiirigelinta da`yarta jecel xirfadda isboortiga qeybahiisa kala duwan, ciyaartoydan waxaan ka caawinaynaa inay xushaan ciyaaraha ay jecel yahiin oo lagu carbinayo si mustaqbalka ay u noqdaan kuwo dalka anfaca” ayuu warbaahintan u sheegay Xildhibaan C/qani Jeeyo.
Dhinaca kale Jeenyo ayaa sheegay in sidoo kale sheegay inay tani tahay waxqabad bilow u ah qorshaha uu ku haminayo inuu kaga qeybqaato horumarinta isboortiga, isagoo xusay in dhamaan meel kasta oo ka mid ah Maamulka HirShabelle uu gaarsiin doono mashruucan cusub ee jiilka soo korayo loogu carbinayo isboortiga isla markaana Ciyaartoyda ama Naadiyada qeybaha kala duwan ee maamulka hoos yimaada ku dadaali doono horumarintooda iyo qalabeyntooda sida ugu dhaqsiyaha badan.
Si kastaba, C/qani Jeenyo ayaa Ra`iisul Wasaarahii hore ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Faarmaajo) u magacaabay la-taliyaha Arrimaha Dhalinyarada iyo Isboortiga sidoo kale muddoyinkii ugu danbeeyayna wuxuu ahaa Guddoomiyaha Dhalinta Cusub ee Soomaaliyeed (Somali New Generation), Mana`aha markii ugu horeysay ee howlo dhiirigelin ama qalabeyn isboorti uu ka qeybqaato, waxaana lagu Xasuustaa inuu qeybo badan oo Gobolada Dalka iyo Xiriirada Heer Qaran ee Soomaaliya uu gaarsiiyay Deeq isugu jirtay qalab isboorti iyo isagii oo isku xilqaamay Tababaridda Ciyaartoy badan oo Soomaaliyeed.
Kubada Koleyga Soomaaliya iyo Isbaheysiga 2017 (Q. 1aad)